January 2016 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
ကားသူခိုး [48.5 MB] [apk]
Than Toe Aung at 9:38:00 PM 0
Than Toe Aung at 9:35:00 PM 0
ဖုန်းထည့်မှာ အဆင့်မြင့်မြင့်နားထောင်းမယ်-PlayerPro Music Player v3.4 APK
Win Hlaing at 3:09:00 PM 0
ဒီနေ့မျှဝေချင်တာက Player ကောင်းကောင်လေးပါ အသစ်ထပ်တက်လာတာနဲ့ အားလုံးအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ Pro ဗားရှင်းမှာ ဆို features တွေ အမိုက်စားတွေ တိုးလာပါတယ်။ ဒီဆော့ဝဲလေးမှာ albums, artists, genres, songs, playlists, folders, and album artists. စာတွေကို ကောင်းကောင်း Performance အဖြစ် မြှင့်ထားတာကို သတိထားမိတယ်။သူ့မှာ ကိုင်ပိုင် Browser လည်းပါသလို လိုင်းနည်းနည်း ကောင်းရုံနဲ့ လိုင်းပေါ်တိုက်ရိုက် ရှာဖွေ နားဆင်နိုင်သလို trial Version ထက် အဆပေါင်းအများကြီးသာလွန်းပါတယ်။ အသံလည်း ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး DJ သီချင်းတွေနဲ့ဆို လန်းမှလန်းပါ။ အသံပိုင်း Display ကိုလည်း ကိုယ်လိုသလို စိတ်ကြိုက် ပြုပြင်နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ Size 11.0 MB ရှိပါတယ်။ 2.0 အထက် ဖုန်းအားလုံးမှာ အဆင်ပြေပါတယ်။
ဖုန်းထဲမှာ chat Video call ခေါ်မယ်-WhatsApp Messenger v2.12.429 APK (နောက်ဆုံး Version)
Win Hlaing at 4:00:00 PM 0
Android OS ဖုန်းကိုင်းဆောင်သူများအတွက်ကတော့ Chat (ဖုန်းနှင့် ချပ်/ ကစားပြောမယ့်) တိမ် ထိုင်းသူများအတွက်ယော့ မိသားစုများနှင့် နိုင်ငံတွေဝေကွာနေပြီး တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် စကားပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းလေးကတော့ viber, line and facebook လိုမဟုတ်ဘူး လိုင်း နည်းနည်းရှိတာနဲ့ တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ထံသို့ အမြန်ဆုံး Massage Video Call တွေကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရှိနိုင်တဲ့ Application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ချစ်စရာကောင်းလောက်တဲ့Sticker များစွာပါဝင်လာပြီး Message box တွင်လဲပြုပြင်ပြောင်းလှဲပြီးပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။android application ဖိုင်းဆိုဒ်လေးကတော့ 27.34 MB ရှိပါတယ်။
(to send and receive messages, pictures, audio notes, and video messages.)
ဖုန်းတစ်လုံးမှာမရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့-Super Backup : SMS & Contacts v2.0.05 APK
Win Hlaing at 9:18:00 AM 0
Android OS တွေမှာ ရှိထားသင့်တဲ့ Application လေးတစ်ခုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Contacts နဲ့ Message တွေကို Backup / Restore လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Application Updated လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Backup လုပ်တဲ့ Application တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ဝင်းလှိုင်ကတော့ အခုတင်ပေးလိုက်တာလေးကို Recommend လုပ်ပါတယ်ဗျာ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ Error ကင်းကင်းအသုံးပြုနိုင်လို့ ဘဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Phone တစ်ခုခုဖြစ်သွားလို့ အစအဆုံး Format ပြန်ရိုက်ရရင်တော့ Contact တွေက ပျက်သွားမှာသေချာပါတယ်။ Contact ဆိုတာမျိုးက ပျက်သွားရင် အတော်လေးကို ကွိုင်တက်ပါတယ်။ မနည်းကိုလိုက်စုပြီး အသစ်ပြန်ရိုက်ရတာမျိုးပါ။ ဒါကလည်း လူတိုင်းသိပြီးသားပါ။ Message ကတော့ဗျာ။ ရိုက်ထားပြီးသားတွေ ပြန်မရနိုင်တော့ပါဘူး။အမှတ်တရMessage တွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ သေပြီဆရာဘဲ။ အဲဒါကြောင့် Message နဲ့ Contact တွေကို Backup လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဗျာ။ သိထားပြီးသားအကြောင်း အရာတွေကို ထပ်ပြီးပြောပြနေတာက အရေးကြီးကြောင်းသိစေချင်လို့ပါဗျာ။ သေးသေးကွေးကွေး Application လေးဆိုတော့ တွေ့တုန်းလေးယူထားစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေးကတော့ ဘော်ဒါတို့အတွက် Android OS 2.3 အထက်ကိုသုံးနိုင်ပြီး ဖိုင်းဆိုဒ်လေးကတော့3.1MB ဖြစ်ပါတယ်
Than Toe Aung at 11:04:00 PM 0
Daily English Speaking Conversation App
Win Hlaing at 10:38:00 PM 0
အင်္ဂလိပ်စကားပြောခန်းတွေကို အဆင့်လိုက်စုထားတဲ့ app တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်..
စကားပြောခန်းတွေအနေဖြင့်က Level one ရယ်၊ Level Two ရယ်.ပြီးတော့
Level Three ဆိုပြီး သုံးခုခွဲထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်..စကားပြောခန်းအပြင်တစ်ခြား
သိမှတ်ဖွယ်ဖြစ်သော..Phrases နှင့် Idioms တွေကိုပါထည့်သွင်းထားလို့ ပြည့်စုံတယ်
Viber ကဲ့သို့ ဆက်သွယ်နိုင်တဲ-WeChat 6.3.11.64 APK
Win Hlaing at 12:16:00 AM 0
Android ဖုန်းကိုင်ထားသောသူများအတွက် chatting ထိုင် ဆက်သွယ်ရေးမှာ အခုနောက်ပိုင် အကောင်းဆုံးတစ်ဖြစ်တဲ့ Wechat လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာ တစ်ဝမ်း ဘယ်နေရာသွားသွား ဘာလုပ်လုပ် ချစ်သူ ခင်သူ ကို ရုပ်ထွက် ကောင်းကောင်လေးနဲ့ ဖုန်းပြောချင်ရင်တော့ ဒီဆော့ဝဲလေးကိုသာ အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်ဒီဆော့ဝဲလေးဟာ High-quality free calls ကို အကောင်းဆုံး Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ communications app ဖြစ်တဲ့အတွက်... text (SMS/MMS), voice & video calls, moments, photo sharing, and games ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်နိုင်သလိုသူငယ်ချင်း အချင်းအချင်း...Group Chat..လည်း ဖန်တီးနိုင်သေးတဲ့
Than Toe Aung at 10:16:00 PM 0